Mamorona sary fohy miaraka amin'ny endrika manokana amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Mamorona sary fohy miaraka amina endrika manokana ao amin'ny Photoshop
Tania Avila Villalba | | Photoshop
Sariitatra natao tamin'ny endrika namboarina amin'ny alàlan'ny default sy ny saron-tava fametahana mba hamoronana jiro sy aloka.
Una Safidy hamoronana sary fohy, izay ahafahantsika maka sary an-tsaina ny famoronana samihafa ho an'io hevitra io ihany, dia ny fampiasana fitaovana fanaingoana manokana an'ny Photoshop.
Ny hevitra hampiasana an'ity fitaovana ity dia ny fahaizana mamorona endrika vaovao amin'ny endriny manokana, atambatra izy ireo.
Alohan'ny hanombohana hampiasa ilay fitaovana dia tsy maintsy ovay ho pixel ny endriny manokana (boaty voamarika mena amin'ny sary) hanaovana ny endrika vector, izay midika fa tsy hahavery ny kalitaony ny sary rehefa manova ny habeny.
Ny endrika mitovy maninjitra na mitazona ny refiny.
Rehefa mampiasa an'ity fitaovana ity isika dia afaka mamelatra ny endrika araka izay tadiavintsika (mitsivalana na mitsangana), araka ny hita amin'ilay ohatra. Raha izay tadiavintsika dia apetraho ny endrika mitazona ny refy, mitazona ny fiovana isika mandritra ny fametrahana azy io isika.
Ny endrika amam-panao entin'ny Photoshop ihany no ahafahantsika mamolavola azy ireo hamorona sary vaovao araka ny hitantsika amin'ity ohatra manaraka ity.
Na dia mba hanatanterahana asa kalitao aza dia ilaina izany mamorona ny endrinay manokana mampiasa ny sarinay manokana na amin'ny fampiasana sary.
Rehefa mametraka ny endrika amam-panao isika dia tsy ho vitantsika ny mametraka azy ireo amin'ny fomba fijery, manodina azy ireo, manome taratra azy ireo na manao fanovana hafa momba azy ireo ankoatry ny famelarana azy ireo, ny fitazonana ny refiny na ny fanovana azy ireo.
Raha te hanova endrika isika (fomba fijery, fihodinana, fitaratra, sns.), raha vao apetraka dia tsy maintsy ataontsika anaty kaonty sy apetraka amin'ny sosona hafa.
Ilaina izany, toy ny rehefa manao sary amin'ny borosy amin'ny Photoshop isika, mamorona ny sosona ilaina hametrahana tsara ireo zavatra amin'ny sary ary izany dia mamela antsika hanohy hiasa amin'izy ireo any aoriana.
Raha vantany vao nahavita ny mainty sy ny fotsy isika, dia afaka manomboka mametraka volondavenona mba hamoronana faritra maivana sy alokaloka. Loharano iray izay tena hahasoa antsika dia ny fampiasana ilay antsoina hoe saron-tava na sarontava. Izy io dia ny famoronana sosona iray mba hahafahantsika miasa amin'ny hazavana, loko na endrika amin'ny fomba izay ananantsika amin'ny sosona hafa.
Araka ny hitantsika amin'ny horonan-tsary, hanomezana sosona iray hafa, dia hoterenay ny Alt key, tazonintsika izy ary apetrantsika eo anelanelan'ny sosona roa ny kursor (Etsy ambony no hapetrantsika ao amin'ilay sosona hafa izay apetraka etsy ambany) tsindrio izahay ary ny sosona ambony dia ho lasa ampahany amin'ny farany ambany, amin'izay ny zavatra rehetra ataontsika ao amin'ilay sosona voatendry dia hisy fiantraikany amin'ny endrika tafiditra ao anaty sosona ambany ihany fa tsy amin'ny ambiny endrika ao amin'ny endritsika. Azonao atao ny manome saron-tava kopika maro araka izay tadiavinao.
Azo ampifangaroina koa ny saron-tava sy ny sarontava, tena ilaina rehefa te-hametraka endrika eo amin'ny sarinay izahay. Mba hanaovana izany, raha vantany vao nanendry sosona iray hafa tamin'ny alàlan'ny Alt isika, dia mametraka ny tenantsika eo amin'ilay sosona efa notendrenay ary tsindrio ny bokotra mamorona sarontava, manaova loko mainty ary avy eo, amin'ny fotsy, dia ahariharintsika ireo faritra mahaliana izahay miaraka amin'ny borosy. Azonao atao ny mahita ohatra iray amin'ny fomba fanaovana azy ao amin'ilay horonan-tsary mifatotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Mamorona sary fohy miaraka amina endrika manokana ao amin'ny Photoshop
Kirby Jenner dia manohy mampiseho ny tenany amin'ireo olo-malaza sy maodely amin'ny fomba tsara indrindra
Ahoana ny fomba hamoronana sary famantarana telo loko amin'ny sary